Romantic/Luxe Cottage/PrivateSauna/Fireplace/Beach - I-Airbnb
Indawo yam ikufuphi neBloeendaal beach 15 min ngebhayisikili, Haarlem 10 min, Amsterdam 20 min ngemoto / ngololiwe. Umgama wokuhamba ngololiwe, kwilali yaseBloeendaal eneendawo zokutyela ezithandekayo. Sibekwe kwenye yezona ndawo zintle zaseHolland. Ilungele abathandi bendalo kunye nabakhweli beebhayisikile. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, kunye nabahambi beshishini. I-super de luxe cottage ixhotyiswe nge-sauna kunye neziko. Ibhloko ekhitshini elula. Ithala elithandekayo kwigadi enkulu enetafile yokutyela. Khusela yokupaka free.
Le ndlu ibekwe kwigadi ethandekayo ecaleni kwepaki yesizwe iKennemerduinen. Ivulekile kwaye ilula kunye nomgangatho ukuya kwiingcango zesilingi ezityibilikayo. Yonke into igqitywe kwimigangatho ephezulu kwaye unesauna yakho kunye nendawo yomlilo. I-Terrace phambi kwe-cottage ukonwabela isidlo sakho sakusasa kunye neglasi yakho yewayini ekupheleni kosuku lwakho.
4.83 · Izimvo eziyi-282
IBloeendaal yenye yeelali ezidumileyo eHolland, sijikelezwe zizindlu ezintle kunye nezitiya. Iipaki zelizwe ezimangalisayo kunye neelwandle zohambo olude okanye ukukhwela ibhayisekile zonke zikwiminyango yethu. Ukutya okulungileyo kunye nokutya konke kunokufikelelwa ngeenyawo.
Uyakuhlala ekhona umntu okhoyo ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Overveen